အိန္ဒိယတွင်ထိပ်တန်းရိုးသားနိုင်ငံရေးသမား ၁၀ ယောက်စာရင်း - နိုင်ငံရေးသမား
အိန္ဒိယရှိထိပ်တန်းရိုးသားနိုင်ငံရေးသမား ၁၀ ဦး စာရင်း
အိန္ဒိယ၏လှပသောသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအားလုံးအတွက်လှုံ့ဆော်မှုပေးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောခေါင်းဆောင်များကအိန္ဒိယကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ပြည်သူလူထုနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအကြားယုံကြည်မှုနှေးကွေးသွားသည်။ သို့သော်နိုင်ငံရေးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူသောစနစ်တစ်ခုတွင်အခက်အခဲများအားလုံးကိုတိုက်လှန်နေစဉ်သူတို့၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းထားသောနိုင်ငံရေးသမားများရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ကျိုးနွံခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အတူအခြေခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားကြသူထိုကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်များအများအပြားရှိသော်လည်းဤဆောင်းပါးတွင်ဤထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၁၀ ဦး ကိုသာကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ကြီးမားသောနိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော်လည်း၊
၁ ။ Lal Bahadur Shastri
နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဆိုပါစို့ ရူပီးတစ်ချေးငွေယူခဲ့ရသည်။ ၅၀၀၀ ရူပီးကုန်ကျတဲ့ Fiat ကားကိုဝယ်ဖို့ ၁၉၆၄ မှာ။ နှစ်ပေါင်းများစွာကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ လက်ရှိမြင်ကွင်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးသမားမျိုးကိုတွေ့ရခဲသည်။ သို့သော်အိန္ဒိယ၏ဒုတိယ ၀ န်ကြီးချုပ်လာလာဘာဟတ်ရှာစထရီသည်ယခင်ကဤသက်ရှိဂြိုဟ်ကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်အင်ဒို - ပါကစ္စတန်စစ်ပွဲအတွင်းတိုင်းပြည်ကို ဦး ဆောင်ပြီးမှ Jai Jawan Jai Kisan Lal Bahadur Shastri သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း၏အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။
နှစ်။ ခ R. အမ်ဘေဒကာ
Babasaheb ဟုမကြာခဏခေါ်ဝေါ်ကြသောဘီ။ အမ်ဘေဒကာသည်နိုင်ငံရေးသမား၊ အိန္ဒိယဥပဒေပညာရှင်၊ စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားအဖြစ်သာမကလူမှုရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုများ (Dalits) အားထိုးနှက်ခြင်း၊ Dalit ဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်ရှားမှု ။ လွတ်လပ်သောအိန္ဒိယ၏ပထမဆုံးဥပဒေနှင့်တရားရေး ၀ န်ကြီးနှင့်အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ဗိသုကာပညာရှင်သည်ယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းသည် မည်သည့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုစွဲချက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဘူး မိမိအနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံး။ သူသည်အစွမ်းထက်သောရာထူးများရရှိထားသည့်အပြင်သူကိုယ်တိုင်သည်ချွေတာသောနိုင်ငံရေးတွင်မပါ ၀ င်ဘဲလူ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းကျိုးအတွက်အမြဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်မှသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အနေဖြင့် B. R. Ambedkar သည်အမှန်စင်စစ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးသမားများအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
မိမိအ gf နှင့်အတူ darshan raval
3. အီးအမ်အက်စ် Namboodiripad
မျက်မှောက်ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးတွင်လက်ဝဲလက်ဝဲအနည်းငယ်ကျန်ရှိသော်လည်းတစ်ချိန်ကကွန်မြူနစ် CM ၏ EMS Namboodiripad ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်ကြီးထွားလာသည်။ Kerala မော်ဒယ် ။ 'သူ၏လူမှုရေး attribute တွေ ကြိုးနှင့်ဉာဏရိုးသားမှု မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အထက်တန်းဇာတ်ပုဏ္ဏားမိသားစုတွင်မွေးဖွားပြီးနောက်၌ပင်အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင်သူသည်အောက်ခြေလူတန်းစားများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်ရှေးရိုးအစဉ်အလာများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ၏စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းအမြင့်ဆုံး၊ မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်မားသောသက်တမ်းနှင့်အကောင်းဆုံးလိင်အချိုးအစားတို့ကဲ့သို့ယနေ့ကီရာလာတွင်အဘယ်အရာများများရှိသည်ကိုပြည်နယ်၏ပထမဆုံး ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ၂၈ လတာ Namboodiripad ၏သက်တမ်းတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသိရှိနိုင်သည်။
4. Jayaprakash Narayan
လူ့ဘောင်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့မဲဆန္ဒဘဏ်အပေါ်အခြေခံပြီးသေးငယ်သောနိုင်ငံရေးတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူ၏ငွေများကိုကောက်ယူခြင်းမရှိဘဲ၊ Jayaprakash Narayan ၏အမည်မှာရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာသည်။ လူကြိုက်များသော JP သို့မဟုတ် Lok Nayak, Jayaprakash Narayan ဟုရည်ညွှန်းကြသည် လူမှုရေးအလုပ်မှသူ၏ဘဝတစျခုလုံးကိုအပ်နှံခဲ့သည် ။ ၀ န်ကြီးချုပ်အား ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းကဆန့်ကျင်မှုများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည့်“ အိန္ဒိယ Quit India Movement ၏သူရဲကောင်း” ကိုအကောင်းဆုံးအမှတ်ရနေသည် Indira ဂန္ဒီ သူ၏ဖြုတ်ချခြင်းခံရရန်အတွက် 'လုံးဝတော်လှန်ရေး' ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
5. Gulzarilal Nanda
တိုင်းပြည်ထံအပ်နှံ Gulzarilal Nanda ရဲ့ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ရိုးသားဘဝ၏သက်သေခံချက်ကိုသူ 1998 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ 15 ရက်နေ့တွင် Ahmedabad တွင်ကွယ်လွန်သောအခါ, သူ့မိသားစုလိုအပ် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုထုပ်ပိုးရန်အိတ်တစ်လုံးသာရှိသည် ။ ငါးကြိမ်မြောက်အမတ်မစ္စတာနန်ဒါသည်သူကွယ်လွန်ချိန်တွင်သူ့နာမည်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ နှစ်ကြိမ်တိုင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားဖြတ် ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်၌ပင်သူသည်နိုင်ငံရေးကိုသူ၏မိသားစုဘဝအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ရန်ဘယ်တော့မှခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိသလို၊ သူ့မိသားစု၏တရားဝင်မော်တော်ယာဉ်ကိုလည်းအသုံးပြုခွင့်မပြုခဲ့ပါ။
၆ ။ Atal bihari vajpayee
အိန္ဒိယတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်မကြာခဏခေါ်ဝေါ်ခံရသည့် Atal Bihari Vajpayee သည်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သောပါရမီရှင်တစ်ပါး၊ ထင်ရှားသောပါလီမန်အမတ်တစ် ဦး၊ အောင်မြင်သော ၀ န်ကြီးချုပ်တစ် ဦး၊ ကဗျာဆရာတစ် ဦး၊ သူကသူ့ကိုယ်သူအတွက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သုံးကြိမ်မြောက်အိန္ဒိယ ၀ န်ကြီးချုပ်မစ္စတာဗီဂျေရီသည်မစ္စတာဗန်ငေးအားတိုက်တွန်းခဲ့သော ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်အစိုးရ၏ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပျက်ပြားသွားပြီးနောက်ပါလီမန်သို့သူ၏ကျော်ကြားသောမိန့်ခွန်းမှဆင်းသက်လာနိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသောနိုင်ငံရေးမှအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်ဟာဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီးငါတို့အားလုံးကသူ့ရဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်တွေဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုနိုင်ငံတော်ဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်တွင်ပူဇော်ရမည်။ ဤစွမ်းအားဂိမ်းများသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ အစိုးရများလာပြီးအစိုးရများသွားသည်။ ပါတီများပေါ်လာနှင့်ပျောက်ကွယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီတိုင်းပြည်ဟာဆက်လက်တည်ရှိသင့်တယ်၊
စိတ်ခံစားမှုရှိသူ Vajpayee သည်သူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်သောမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချမှုနှင့်ရိုးသားမှုကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်တွင်ဘုရားသခင်အားသူဤသို့ဆုတောင်းသည် -“ ဟေ့ Prabhu! ဤအရာသည်သင့်အားများစွာအထောက်အကူပြုသည် ။ '
၇ ။ Manik Sarkar
Manik Sarkar သည်နိုင်ငံရေးသမားများတွင်ရိုးသားသောနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်နိုင်သည်။ စံနမူနာယူထိုက်သောရိုးသားမှုအတွက်သူ၏အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဘက်များကပင်ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးယခင် Tripura CM Manik Sarkar သည်အိမ်တစ်လုံးနှင့်မြေယာများကိုပင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သူဟာဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံးမသယ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး၊ နှင့်အတူ ရူပီးသာ သူ၏ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာ 2,410 (၂၀၁၈ ခုနှစ်မတ်လတွင်ကဲ့သို့) သူသည် CPI (M) ပါတီဌာနချုပ်ရှိအခန်းနှစ်ခန်းပါသောတိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်သည်။ ၁၉၉၈ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ထရီပူရာ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်ပြည်နယ်၏အရှည်ဆုံး ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ပါတီသို့သူ၏လစာကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီးရူပီးငွေလည်းရသည်။ ပါတီမှထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်ပါတီမှ ၅၀၀၀ ။ ထရီပူရာ ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်စဉ်တောင်သူသည်ဒေသခံလမ်းများပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နေသည်ကိုမကြာခဏတွေ့မြင်နိုင်သည်။ လမ်းဘေးဈေးဝယ်သူများထံမှဟင်းသီးဟင်းရွက်များဝယ်ယူခြင်းနှင့်သူ၏ဇနီးကိုပြဇာတ်တစ်ခုနှင့်အတူလိုက်ပါလာခြင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Sarkar က
၈ ။ Manohar parrikar
ပါတီများကိုဖြတ်ပြီးဖြတ်သွားသောနိုင်ငံရေးသမားများက Manohar Parrikar အားသမာဓိစောင့်သိမှု၏အထွတ်အထိပ်အဖြစ်မှတ်မိကြသည်။ လေးကြိမ်မြောက် Goa ၀ န်ကြီးချုပ်နှင့်ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဟောင်းမစ္စတာပါရီကာသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရှားရှားပါးပါး IITian ဖြစ်သော်လည်းသူနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိသောစိတ်အချရဆုံးခေါင်းဆောင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ပန်ကရိယကင်ဆာရောဂါဖြင့်တိုက်ပွဲများရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်သူ၏အလုပ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ မစ္စတာပါရီကာရ်သည်ရိုးရှင်းသောဘဝဖြင့်နေထိုင်ခဲ့ရပြီးအချို့ရပ်ကွက်များမှဝေဖန်မှုများကိုပင်ကြုံခဲ့ရသည်။ chappals အတွက်ဂုဏ်အသရေတစ်ကိုယ်ရံတော်စစ်ဆေးခြင်း ။ သူသည်ရဲရင့်သောတရားဝင်မော်တော်ယာဉ်များကိုရှောင်ရှားပြီးသူ့အိတ်ကိုသယ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ Goa တွင်သူသည်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင်မငြိမ်မသက်မှုများနှင့်ရောနှောနေခဲ့သည်။
၉ ။ Naveen Patnaik
ရိုးရှင်းမှု၊ နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ရိုးသားခြင်းစသည့်နာမဝိသေသနများသည်တကယ်တော့ Nucen Patnaik Biju Janata Dal ၏ဥက္ကfor္ဌဖြစ်သည်။ သူ့ မရိုးရှင်းသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ နှင့်ရိုးသားမှု၏ဂုဏ်သတင်းကို Odias အကြားသူ၏ရေရှည်တည်တံ့ကျော်ကြားမှုမှသိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့တော်မူပြီ သူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ၀ န်ကြီးချုပ်တစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Pawan Chamling နှင့် Jyoti Basu အပြီးအိန္ဒိယပြည်နယ်၏ ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရာထူး ၅ ခုဆက်တိုက်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့်တတိယမြောက်အိန္ဒိယ ၀ န်ကြီးချုပ်သာဖြစ်သည်။
၁၀ ။ Mamata Banerjee
Mamata Banerjee သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးစင်မြင့်တွင်မိမိကိုယ်ကိုနယ်ပယ်တစ်ခုကိုထွင်းထုထားသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများအတွက် plebian ရဲ့သူတစ် ဦး ကအမျိုးသမီးတစ် ဦး, သူမတစ် ဦး classy ကြီးပြင်းလာခြင်းမရှိသေးပေ။ သူမ၏ဖခင်သည်သူမအားအင်္ဂလိပ် - အလယ်တန်းကျောင်းသို့မပို့နိုင်ခဲ့ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် Mamata အသက် ၁၇ နှစ်တွင်ဆေးကုသမှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ သူမကောလိပ်ကျောင်းများအတွင်းတွင်မတားဆီးထားသော Mamata Banerjee သည် Jaiprakash Narayan ကား၏ဘောနက်ပေါ်တက်လာသောအခါသူမသည် အဝတ်အထည်၊ အလှကုန်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာများအတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်မည်မဟုတ်။ သူမနိုင်ငံရေးရာထူးတစ်လျှောက်လုံးတွင်သူမဟာလူသိရှင်ကြားထိန်းသိမ်းခဲ့သည် ခြိုးခြံခြွေသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ ; ရိုးရှင်းသောရိုးရာဘင်္ဂါလီရိုးရာအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်းများကိုရှောင်ရှားသည်။
shahrukh Khan Mannat ၏အိမ်
shera salman khan သက်တော်စောင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မိသားစုနှင့်အတူ salman Khan ဓာတ်ပုံ
deepika padukone မွေးဖွားသည့်နေ့
bigg သူဌေးက2ပြိုင်ပွဲဝင်ဖျက်သိမ်း